Contact Us Help Center FAQs
Ship to Myanmar/MMK
Shipping to: Myanmar USA Singapore
Currency: Myanmar MMK USD US$
All categories General Accessories Electronic Home Appliances Health & Beauty Baby & Toys Home Lifestyle Vehicle & Machine Fashions Promotion
Home Categories Shops Products
Existing password :
Electronic Kitchen Liefstyle
Vehicle & Machine
group buy (current)
ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒသည်သင်၏၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူခြင်းအတွက် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပုံ၊ မျှဝေပုံကိုဖော်ပြသည်။
https://www.asxox.com.mm/ (the “ Site ” ) and asxox (the “ App ” ).
သင်ဆိုက်ကို ၀င်ရောက်သောအခါသင့်စက်၏အချက်အလက်များအပါအ၀င်အချို့သောအချက်အလက်များ သင်၏ web browser၊ IP address၊ time zone နှင့်သင်၏ device တွင်ထည့်သွင်းထားသော cookies အချို့အပါအ၀င်အချက်အလက်အချို့ကိုအလိုအလျောက်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ သင်ကြည့်သောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ (သို့) ထုတ်ကုန်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ၊ ဝဘ်ဆိုက်များ (သို့) ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများသည်သင့်အားဆိုဒ်သို့၎င်းနှင့်သင်မည်သို့ဆက်သွယ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များ ဤအလိုအလျောက်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကို “ စက်ပစ္စည်းအချက်အလက်များ ” ဟုရည်ညွှန်းသည်။
၀ယ်ယူခြင်းသို့ ၀ယ်ယူရန်ကြိုးပမ်းသည့်အခါတွင်လည်းသင်ရဲ့နာမည်၊ ငွေတောင်းခံလွှာလိပ်စာ၊ ပို့ဆောင်မည့်လိပ်စာ၊ ငွေပေးချေမှုအချက်အလက်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်တို့အပါအ၀င်အချို့သောအချက်အလက်တွေကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် site မှတဆင့်မည်သည့်အမှာစာကိုမဆိုဖြည့်ဆည်းရန်ယေဘုယျအားဖြင့်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသည် (ငွေပေးချေမှုအချက်အလက်များအားစီမံခြင်း၊ ပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်ခြင်း၊ ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်/သို့မဟုတ်အမှာစာအတည်ပြုခြင်း)
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှာစာအချက်အလက်ကို သုံး၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှာစာများကိုစစ်ဆေးရန် သင်နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များနှင့်လိမ်လည်မှုများ ( အထူးသဖြင့်သင်၏ IP လိပ်စာ) ကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောစက်ပစ္စည်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။
သင်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့တရားမ၀င် ၀င်ရောက်ခြင်း (သို့) မတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) မတော်တဆပျက်စီးခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သင့်တော်သောနည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံများကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားပါသည်။ ဆိုက်ကတဆင့်ဒေတာတွေကိုစုဆောင်းသောအခါလုံခြုံတဲ့ဆာဗာပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းပြီး Firewall များကိုသုံးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် လူကြီးမင်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မထုတ်ဖော်မီရံဖန်ရံခါအထောက်အထားတောင်းခံနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက်မေးခွန်းများရှိလျှင် ( သို့)သင်တိုင်ကြားလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ support@asxox.com သို့အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
လိပ်စာ: ၁၆၅ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “ Device Information. ”
We collect Device Information using the following technologies: - “ Cookies ” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier.
We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations)
For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to makeacomplaint, please contact us by e-mail at support@asxox.com.
Address: 165 Tapin Shwe Htee Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon, 11041, Myanmar.
Quantity and Saving